Le yi-iPhone ehambelana no "Phendlo" icinyiwe | IPhone iindaba
Le yi-iPhone ehambelana no "Khangela" xa icinyiwe
Inkampani yaseCupertino igxekwe kabukhali (kwaye ayiyiyo ipati?) Kuba ithiyori, kwabaninzi, izinto ezintsha ze-iOS 15 azonelanga kwaphela. Nangona kunjalo, ngoku lixesha lokuba kugxilwe kulwenziwo kwi-iOS oluqhutywa kwaye olumele inkqubela phambili yetekhnoloji.
Nge-iOS 15, i-iPhone yakho inokufumaneka nokuba icinyiwe kwaye iSIM khadi isusiwe, nangona kunjalo, ayizizo zonke i-iPhone eziza kuhambelana. Siza kujonga obu buchwephesha buye basebenzise iApple kwi-iPhone ngokufika kwe-iOS 15 kwaye ngakumbi ukuba uya kuba nakho ukuyonwabela okanye hayi.
Konke oku kusekelwe kwi-Ultra Wideband ye-Apple (UWB), Itekhnoloji efanayo esetyenziswa kwi-AirTag kwaye esivumela ukuba siyifumane ngaphandle kwento yokuba ayinalo naluphi na uhlobo lwetekhnoloji engenazingcingo ngaphandle kweBluetooth Low Energy elula. Ngoku, i-iPhone yakho ene-iOS 15 iya kusebenza njenge-AirTag, oko kukuthi, uya kuba nakho ukuyifumana nokuba ilahlekile kunxibelelwano kwinethiwekhi okanye icinyiwe, ubuncinci ngelixa isenenxalenye encinci yebhetri eseleyo .
Ingxaki kukuba zizixhobo ze-iPhone 11 kuphela eziya kuxhaswa. Njengoko besesitshilo, ngelixa zikhona ezinye izixhobo ezinetekhnoloji ye-Ultra Wideband kufutshane, kuyenzeka ukuba uyifumane i-iPhone, kuba inethiwekhi yendawo eza kwenziwa iya kwenziwa. Le teknoloji ye-Apple yenza umdla ngendlela esinokuthi sifumane ngayo ukhuseleko olongezelelekileyo, amasela aya kucinga ngakumbi ngayo xa ebe i-iPhone ukuba i-Apple iyaqhubeka nokusebenzisa olu hlobo lwetekhnoloji kuba isibonelelo soku sincinci siya kuba sincinci.
Uluhlu lwezixhobo ezihambelana noPhando ngelixa licinyiwe
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Le yi-iPhone ehambelana no "Khangela" xa icinyiwe
UCristian Murro sitsho
Ngelishwa baya kuqhubeka nokubabile ukuze bathengise amaqhekeza, oko akunakuphepheka, naxa bekubile ababuzi ukuba yi-iPhone kwaye ukuba inendawo esebenzeyo jje
Phendula Cristian Murro